डिसेम्बर 25, 2016 डिसेम्बर 25, 2016 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments कविता, जेल सजाय, राष्ट्रपति
पूर्व राष्ट्रपतिकोबारे कविता लेख्नेलाई ६ महिनाको जेल सजाय ! प्राय गरेर कविता त कापीमा लेखिन्छ । तर कतिपय मानिसले आफ्नै लिंगमा कविता कोर्दा नराम्रोसँग कानूनको फन्दामा परेका छन । म्यानमारमा आफ्नो लिंगमा पूर्व राष्ट्रपति थेन सेनको बारेमा कविता लेख्ने एक युवकले ६ महिनाको जेल सजाय पाएका छन् । माउंग सौगखा नामका २४ वर्षीय ती युवकले आफ्नो लिंगमा टाटु खोपाएर पूर्वको बारेमा लेखेको भन्दै एउटा कविता सोसल मिडिया फेसबुकमा पोष्ट गरेका थिए ।
पूर्व राष्ट्रपतिको बारेमा लिंगमा कविता लेखेर फेसबुकमा पोष्ट गर्ने सौगखालाई पुलिसले पक्रेर मानहानीको मुद्धा चलाएको थियो । मानहानीको मुद्धामा उनलाई ६ महिनाको जेल सजाय सुनाइएको छ । ६ महिनाको जेल सजाय सुनाइएपनि सौगखा अब जेल बस्नुपर्ने छैन । किनकी मुद्धा चालु रहेकै अवस्थामा उनले ६ महिना जेलमा बिताइसकेका छन् र उनको जेल भुक्तान भैसकेको हुँदा उनी रिहा हुँदैछन् ।
जनमत सर्वेक्षण – राष्ट्रपतिमा विद्या भण्डारी र उपराष्ट्रपतिमा नन्दबहादुर पुन कै निरन्तरता पाउने अनौपचारिक टुंगो लागिसकेको भन्ने कुरामा तपाईको धारणा के छ ?
फ्रेवुअरी 20, 2018 मार्च 11, 2018 साइन्स इन्फोटेक 0
फ्रेवुअरी 16, 2018 मार्च 11, 2018 साइन्स इन्फोटेक 0